လိပ်ပြာမသန့်တဲ့ အရပ် – Saung Luu – MoeMaKa Burmese News & Media
လိပ်ပြာမသန့်တဲ့ အရပ် – Saung Luu
ဆောင်းလူ ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၄
လုိုချင်တာမရနုိုင်သည့် အခြေအနေကိစ္စတုို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တခုနှင့်အတူ ကုိုယ့်မြေ ကုိုယ့်ရေ ကုိုယ်လေကုို စွန့်ခွာထွက်ခဲ့သည်မှာ အ တော်ကြာခဲ့ချေပြီ …။ ခုတော့လည်း … အတော်ကျင်လည် ကျက်စားမိသည်နှင့်အညီ .. ကုိုယ့်မြေ ကုိုယ့်ရေ ကုိုယ့်လေကုို လွမ်းမိ၏။
ထုိုအရပ်၏ ယခုနွေတွင် ပုရစ်ဖူးတုို့ ဖူးနေပေရော့မည် …။
ထုိုအရပ်၏ ယခုနွေတွင် လေရူးတုို့ မြူးနေပေရော့မည် …။
ထုိုအရပ်၏ မြင်ကွင်းတုို့သည် …
ထုိုအရပ်၏ ရှုခင်းတုို့သည် ….
ထုိုအတောအတွင်း …ဤအရပ်တွင် .. ကျွနု်ပ်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မကုိုက်ညီ၊ အနစ်နာမခံခဲ့ပါပဲနှင့် အကျိုးအမြတ်ကြီးကြီး ရလုိုမှုဖြင့် ဒုက္ခသည်အဖြစ် ဟန်ဆောင်ခဲ့ရသည် …။ အမှန်တကယ် စစ်မှန်သည့်ဒုက္ခသည်များကုိုဖြင့် မျက်နှာပူ အားနာခဲ့ရသည်။ အမှန်တကယ် ဒုက္ခခံရင်းနှီးခဲ့ရသူတုို့အတွက် မျက်နှာပူ အားနာခဲ့ရသည်။
အမှန်တကယ် တမ်းဆုိုရင်ဖြင့် ထုိုအရပ်သည် ကျွနု်ပ်၏ လိပ်ပြာတုို့ကုို လှောင်ပြောင်ရာ အရပ်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အိမ်မရှိ ယာမရှိ တောထဲ တောင်ထဲတွင် မလှည့်လည် မကျင်လည်ခဲ့ရပါပဲဖြင့် …
ခုချိန်တုိုင် ထုိုအရပ်အတွက် မျက်မှာပူခဲ့သည် …။
စစ်မှန်သည့် ထုိုသူတုို့အတွက် မျက်နှာပူခဲ့သည် …။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်စတေး ဒုက္ခခံ ရင်းနှီးခဲ့ရသူတုို့အတွက် အားနာခဲ့ရသည်။
ကျွနု်ပ် လိပ်ပြာတုို့ မသန့်ရာ ဤအရပ်အတွက် မျက်နှာပူသည်မှာ မဆန်း …။
ကျွန်ုပ် လိပ်ပြာတုို့ မသန့်ရာ ဤအရပ်အတွက် အားနာသည်မှာ မဆန်း …။
ခုချိန်တုိုင် ကျွနု်ပ်သည် ထုိုအရပ်တွင် အမိနုိုင်ငံသားကဒ် ကုိုင်ဆောင်ထားသည့် ကျူးကျော်နုိုင်ငံသား ဖြစ်နေခြင်းကုိုပင် လိပ်ပြာမသန့် …။
ဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်ထားချိန်ကာလထက် ပုိုနေမိသည့်အတွက် လိပ်ပြာမသန့် ….။
ည ည မက်သည့် အိပ်မက်တုို့တွင် ကျွနု်ပ်လိပ်ပြာတုို့သည် ကျွနု်ပ်အား လှောင်ပြောင်မှုပြုနေခဲ့သည်မှာ …. ကာလအတော်ကြာရှိနေခဲ့ပေပြီ …။
ကျွနု်ပ်လိပ်ပြာ မမြင်ကွယ်ရာတွင် ဤစာအား ရေးပါသည်။
← မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် – ၅၅ – Aung Din
လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးလိုမှု ညီမျှခြင်းချ ပဋိပက္ခ →
ဆောင်းလူ – ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ကိစ္စ …
မောင်မောင်စိုး – ဓနုတို့၏ ပင်းတယ
January 1, 2016 January 1, 2016 Aung Htet